Ciyaaraha Princess ee ugu wanaagsan Android | Androidsis
Ciyaaraha Princess ee ugu wanaagsan Android
Paco L Gutierrez | 06/04/2021 11:00 | Ciyaaraha Android, Noticias
Disney waxay nala socotey muddo tobanaan sano ah iyada oo loo marayo filimadeeda filimka ah, laakiin maadaama qalabka moobiilku ay qayb ka yihiin nolosheena, dhammaan filimadaas waxaa weheliya ciyaar fiidiyoow ah. Ciyaarihii ugu wanaagsanaa ee Princess Princess waxay ku badnaayeen konsolladaha ama kumbuyuutarrada laakiin maalmahan tan ugu badan waa inaad ku aragto iyaga oo ku jira aaladaha moobaylka, si bilaash ah laakiin suurtagal ah in lacag yar lagu bixiyo arjiga. Ku habboon carruurta ku hoos jirta xukunka waalidkood.
Ciyaaraha Disney badankood waxaa loogu talagalay kuwa yaryar, in kastoo aan helno ciyaaro nooc kasta leh, sida xujooyinka, tartamada, xiisaha ama halxidhaalayaasha. Dhammaan cayaaraha waxaa si fudud loogu soo dejisan karaa PlayStore-ka bartayada ku taal Android. Qodobkaan waxaan kaaga tagi doonaa xulashooyinka ugu wanaagsan ciyaaraha Princess Princess ee aan ka heli karno dukaanka Google.
1 Ghost Disney Magic sixir
2 Qaboojiyay Fall Free
3 Boqortooyooyinka Disney Magic
4 Dhacdooyinka Disney Qaboojiyay
5 Degmooyinka Disney Story
6 Disney Emoji kala dhantaalay
Ghost Disney Magic sixir
Ciyaarta halxiraalaha ah ee ay abuureen oo ay soo saareen Gameloft oo makaanikyadu aad u fudud yihiin: waxaan farta ku dhajineynaa si aan u dhaqaajino dhagaxyada una isu keeno kuwa isku midab ah si ay u baaba'aan oo ay xalliyaan xujooyinka. Ciyaarta ayaa ina siin doonta taxane ah xoojiyayaal in aan heli doonno inta ay socoto ciyaarta oo naga caawin doonta inaan fulino isku dhafan si ay u qarxiyaan jawharad dhakhso leh oo sidan ayaa lagu helayaa dhibco fiican.
Ciyaarta, sida magaceedaba laga dheehan karo, waxaa jilaya keli-ahaan amiirad ka socota dhammaan sagas ay abuurtay Disney, iyaga waxaa ka mid ah Ariel, Jasmine, Bella iyo kuwo kale. Markaan ciyaareyno oo aan dhameystirno heerarka waxaan fureynaa halyeeyo badan oo ka tirsan Disney sagas kala duwan. Waxaan sidoo kale fureynaa xaalado kale oo aan ku ciyaari karno. Codsigan gabi ahaanba waa bilaash inuu soo dejiyo, laakiin wuxuu ka kooban yahay lacag bixinta dalabka, taas oo noo oggolaan doonta inaan furno waxyaabaha aan u baahnayn inta aan ciyaareyno.
Qaboojiyay Fall Free
Mid ka mid ah ciyaaraha Disney ee leh soo dejinta ugu badan ee Google PlayStore oo waxay noogu muuqataa cadaalad inagoo tixgelinayna tayada ciyaarta iyo cadhada ay koonkan ay abuurtay Disney agagaarka barafoobay ku sii daayo kuwa yaryar. Ciyaartan waa inaan ku biirnaa Elza, Anna iyo Olaf oo ka mid ah jilayaasha kale si loo xalliyo xujooyinka la midka ah kuwa Disney Princess Magic Gems laakiin leh sharraxaadda iyo dejimaha si toos ah looga soo qaatay taxanaha barafoobay.
Sidii kuwii hore oo kale inta aan dhameystirno heerarka waxaan kasban doonnaa qadaadiic iyo abaalmarinno si loo furo qalabka qurxinta si loo qurxiyo loona qoondeeyo fagaarahayaga ku yaal Arendelle oo leh dukaamo, ilo, gaari-gacmeedyo iyo waxyaabo kale. Soo dejinta arjiga gabi ahaanba waa bilaash laakiin waxaa ku jira lacag bixinta gudaha arjiga si loo furo waxyaabaha la isku qurxiyo, waxaa sidoo kale ku jira xayeysiinta inta badan faragalinta ku jirta.
Boqortooyooyinka Disney Magic
Cinwaanka sidoo kale waxaa soo saaray Gameloft oo na geeya beerta Disney oo inkaartii Malefica darteed beerta oo dhan waa la baabi'iyay. Waxaan noqon doonaa kuwa waa inaan taxaddarno inaan ku soo celino jardiinada bilicdeeda oo dhan gudashada hawlo taxane ah iyo la dagaallama sharwadayaasha badan Disney sagas sida Nabar ka soo baxay Libaaxa Boqorka ama Gaston ka soo jeeda Quruxda iyo bahalka. Waa jawi madadaalo badan si loo helo martida si ay u arkaan riyadoodii oo rumowday.
Beerta dhexdeeda waxaa ku yaal in ka badan 100 soojiidasho kala duwan oo la heli karo iyo in ka badan 150 xuruuf oo ka kala socda dhammaan Disney sagas waxaan helnaa amiirad sida Bella, Little Mermaid, Frozen, Anna ... Soo dejinta cayaartu gabi ahaanba waa bilaash inkasta oo ay ku jirto xayeysiis iyo lacag-bixinno yar yar oo ku dhex jira dalabka. Intaa waxaa dheer, ciyaartan waxay leedahay qaab ciyaartoy badan, marka waxaan la wadaagi karnaa khibrada ciyaartoy kale iyada oo loo marayo internetka, ama WiFi ama xog.
Boqortooyada Disney Magic Kingdoms: Abuur Beertaada Sixirka U gaarka ah
Dhacdooyinka Disney Qaboojiyay
Waxaan ku laabaneynaa ciyaarta xujada Candy Crush-style oo halyeeyada ay yihiin kuwa ka socda filimka la qaboojiyay 2. Soo jeedinta waxaa soo saaray Jam City, isla abuurayaasha Disney Frozen Free Fall. Ciyaartan waxaan ku qasbanaaneynaa inaan iskudarsanno taxane ah jawharad si aan u helno baraf baraf ah oo noo ogolaanaya inaan ku qurxinno qalcadda sida aan jecel nahay. Halka waxaan ka guuleysaneynaa boqolaal heerar oo isku dhafan jawharada Waxaan sidoo kale iska qori karnaa dhacdooyinka gaarka ah si aan u furno abaalmarinnada oo aan markaa ku helno qurxin wanaagsan.
Ciyaarta waxaa loo heli karaa si bilaash ah oo laga soo dejiyo Play Store laakiin waxay bixisaa lacag bixin gudaha dalabka ah, lacag bixintani waa kaliya oo kaliya in la helo walxaha lagu qurxiyo qalcadda adigoon ciyaarin, ciyaarta waxaa lagu qiimeeyaa da'da 3 + waana mid caan ku ah dukaanka Google.
Ciyaaraha Disney Qaboojiyay: Ciyaar Cusub 3 Ciyaar
Degmooyinka Disney Story
Waxaan u nimid kulan beddalaya isbedelka liiska xoogaa si aad noo siiso mid ka mid ah kuwa ugu sharraxsan ciyaaraha Princess Princess, oo leh geesinimo iyo sheeko sheeko xujooyin qaar ka mid ah. Ciyaar aad u xiiso badan oo siin doonta saacado madadaalo kuwa yaryar. Ciyaar meesha aan awoodno waxyaabaha buugga ku midab yeeloiyo waliba isku xir dhibco si ay ula socdaan jilayaal kala duwan. Waxaan kaqeyb qaadan karnaa boqolaal ciyaaro yaryar oo nasiin doona helitaanka abaalmarinta. Ku dhiirigali barashada waxqabadyada sida raadinta erayga, dhibcaha, iyo walxaha qarsoon.
Cayaartu waxay si aad ah diiradda u saareysaa carruurta waxayna noqon kartaa mid aad u fudud oo caajis ku ah dadka waaweynCiyaarta guud ahaan waa mid fudud laakiin leh makaanik aad u xiiso badan oo xoogaa kala duwan siiya buugga Disney game. Sida cayaaraha badankood, gabi ahaanba waa bilaash inaad soo dejiso inkasta oo ay ku bixiso lacag bixinta dalabka.
Developer: Istuudiyaha Kuato
Disney Emoji kala dhantaalay
Sida magaceedaba ka muuqata, waa ciyaar Emoji ay yihiin halyeeyada, laakiin Emoji kuwan waxay ka soo jeedaan astaamaha Disney, kuwaas oo ay ka mid yihiin dhammaan amiirrada dhammaan sagas. Waxaa soo saaray ragga ka socda Jam City, waa ciyaar xujo leh oo la mid ah kuwa aan liiska ku hayno, inkasta oo kiiskan halkii dhagaxyo, waa inaan isku darnaa emoji. Si aan ugu gudubno ciyaarta waa inaan raacnaa hawlgallo taxane ah si aan u guuleysano oo aan u ururinno Emojis.
Waan la sheekaysan karnaa dhammaan Emoji ee aan ku darno ururintayada oo aan horumarinno guddigayaga. Waxay leedahay qaab khadka tooska ah si aan ula tartami karno asxaabteena waxaanna lahaan doonnaa dhacdooyin gaar ah ku dhowaad maalin kasta. Ciyaarta, sida dhammaan kuwa ku jira liiska, gabi ahaanba waa bilaash in la soo dejiyo laakiin wax baa laga iibsadaa gudaha dalabka.
Kuwani waa ciyaaraha Disney Princess ee aan kugula talinayno Androidsis, waan u furan nahay soo jeedintaada waana ku farxi doonaa inaan ku aqrino faallooyinka. Haddii aad xiisaynayso ciyaaraha loogu talagalay Android, sidoo kale waad xiisayn kartaa ciyaaraha labiska ugu fiican kuwaas oo aan sidoo kale ka dhigno mid sare.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Ciyaaraha Princess ee ugu wanaagsan Android
9-ka kulan ee ugu fiican shayga qarsoon ee Android
[VIDEO] 3 ku dhowaad falal sixir ah oo aad ku sameyn karto Lens Google